Nkọwa Okwu Ntanetị Intanet - 192.168.8.1
Lelee Ike Signal Ike
Lelee Ike Signal Ike - Ọ bụrụ n ’ụgbụ gị nwayọ nwayọ ma ọ bụ websaịtị agaghị ebu ibu, nsogbu nwere ike ịbụ njikọ Wi-Fi gị. Ma eleghị anya, ị nọ n'ebe dị anya site na ngwaọrụ ahụ, ma ọ bụ oke nkebi na-egbochi mgbaàmà ahụ. Naanị lelee akara ngosi ike nke Wi-Fi.
Ihe kpatara ike mgbama WiFi ji eme ihe dị iche
Ihe mgbaàmà siri ike nke Wi-Fi na-egosi njikọ a pụrụ ịdabere na ya. Nke a na - enyere gị aka iwere uru zuru oke nke ịntanetị nweta. Ike mgbaama nke Wi-Fi na-adabere n'ọtụtụ ihe, dịka ọmụmaatụ ka ị nọrọ site na rawụta, ma ọ bụ njikọ 5ghz ma ọ bụ 2.4, yana ụdị mgbidi dị gị nso. The nso ị bụ ka rawụta, odi mfe. Dịka njikọta 2.4ghz na-agbasa n'ihu, ha nwere ike ịnwe nsogbu nnyonye anya. Oké mgbidi mere nke ok ihe (dị ka ihe) ga-egbochi a Wi-Fi mgbaàmà. Ihe mgbaàmà na-adịghị ike, kama nke ahụ, na-eduga na nwayọ ọsọ, nkwụsị, na ọnọdụ ole na ole 'nkwụsị zuru ezu.
Ọ bụghị nsogbu njikọ ọ bụla bụ nsonaazụ nke ike mgbaàmà na-esighi ike. Ọ bụrụ na ụgbụ na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị adịghị ngwa, bido site na ịmalitegharịa rawụta ma ọ bụrụ na ịnwere ohere maka ya. Ọ bụrụ na esemokwu ahụ na-aga n'ihu, usoro na-esonụ bụ iji hụ ma Wi-Fi bụ nsogbu. Gbalịa jiri ịntanetị jiri ngwa ọrụ jikọtara na Ethernet. Ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, netwọkụ bụ nsogbu. Ọ bụrụ na njikọ Ethernet dị mma & ihe nrụpụta nrụnye enyereghị aka, mgbe ahụ ọ bụ oge maka ịlele ike mgbaama ahụ.
Jiri Ngwaọrụ Sistemụ Wuru
Microsoft Windows na sistemu ndị ọzọ na-arụ ọrụ nwere uru arụpụtara iji nyochaa njikọ ntanetị ikuku. Nke a bụ ụzọ kachasị mfe ma dị mfe iji tụọ ike Wi-Fi.
Na ụdị ọhụrụ nke Windows, họrọ akara ngosi ntanetị na taskbar iji hụ netwọk ikuku ị jikọtara. Enwere ogwe ise na-egosi ike mgbaàmà nke njikọ ahụ, ebe otu bụ njikọ kacha daa ogbenye na ise kacha mma.
Iji ama Tebụl
Mobilefọdụ ngwaọrụ mkpanaka nke nwere ike ịntanetị nwere otu ntọala na ntọala nke gosipụtara netwọ Wi-Fi ike na nso. Dịka ọmụmaatụ, na iPhone, gaa na ngwa Ntọala, gaa na Wi-Fi ugbu a iji lelee ike netwọk Wi-Fi ị nọ na & ike mgbaàmà nke netwọkụ dị nso.
Gaa Utility Mmemme gị Ikuku nkwụnye
Ole na ole na-emepụta nke ikuku na netwọk akụrụngwa ma ọ bụ akwụkwọ ndetu PC na-enye ngwanrọ ngwanrọ nke na-enyocha ike mgbaama ikuku. Ngwa ndị dị otú a na-agwa ike & ogo mgbaàmà dabere na 0 si 100 pasent & nkọwa zuru ezu ahaziri iche na ngwaike.
Sistemụ -chọta Wi-Fi Bụ Otu nhọrọ
Ngwaọrụ Wi-Fi na-achọpụta elere redio dị na mpaghara agbata obi ya wee chọta ike mgbaama nke akara site na isi ụzọ ikuku. Wi-Fi detector sexist n'ụdị pere mpe ngwaike ngwaọrụ nke dabara na isi yinye.
Imirikiti usoro ịchọta Wi-Fi na-eji setịpụrụ n'etiti 4 na 6 LEDs iji gosipụta ike mgbaama na nkeji nke Ogwe dị ka ọrụ Windows. N'adịghị ka usoro ndị dị n'elu, mana Wi-Fi na-achọpụta usoro ngwaọrụ anaghị atụ ike nke njikọ mana n'ọnọdụ ya, na-ebu amụma banyere ike nke njikọ ahụ.
Categories Nkọwa Internetntanetị Hapụ ikwu
Blacklist / Block WiFi Ọrụ
Blacklist / Block WiFi Users - N'agbanyeghị na e chebe gị site na usoro nke mkpụrụedemede ma ọ bụ akwụkwọ ozi ma ọ bụ ha abụọ, ọ ga-ekwe omume ka onye na-ekwu okwu nweta ohere ịbanye na ọfịs gị ma ọ bụ n'ụlọ WiFi. Onye ọbịa bean, onye na-agafe agafe ma ọ bụ onye agbata obi gị, mana onye ọ bụla ha bụ, ọ dị mkpa ịmara otu esi achọta mgbe akụrụngwa na-akwadoghị ma ọ bụ nke amatabeghị jikọọ na netwọkụ Wi-Fi gị ma mechaa, belata njedebe ha ma gbochie ha.
Na mgbe na-agbanwe gị rawụta paswọọdụ bụ ụzọ kasị mma machibido ohere nke ihe amatabeghị gadget, ọ bụ dịtụ na-agwụ ike & counter na-arụpụta. O doro anya na onye na-atụ egwu agaghị 'agbawa' okwuntughe ohuru ma nweta nbanye na netwọkụ gị.
N'okpuru ebe edepụtara bụ ụzọ ole na ole a pụrụ ịdabere na ya iji chọpụta & ngọngọ a ma ọ bụ Ngwa na gị Wi-Fi network enweghị agbanwe agbanwe gị rawụta paswọọdụ.
1. Nzacha Ikuku MAC Address
Ihe nzacha MAC na-enyere aka igbochi ndị ọrụ WiFi enweghị ikike ijikọ na Wi-Fi gị, netwọkụ MAC bụ nọmba NJ (ngwaike) nke na-achọta ngwaọrụ ọ bụla na netwọkụ. A na-emepụta adreesị MAC n'ime kaadị netwọk ọ bụla & enweghị 2gadgets n'ụwa nwere ike ịnwe otu adreesị MAC ahụ.
Ya mere, site na iji a MAC adreesị ngwaọrụ, ị nwere ike nke na-akpaghị aka ịtụ gị rawụta ka ikike ma ọ bụ na-ajụ ngwaọrụ ntinye na netwọk.
Iji mee nke a, banye na ntanetị njikwa Ntinye Ntinye
N'okpuru WLAN ma ọ bụ Ikuku ngalaba na console, ị ga-elele MAC nzacha nhọrọ.
Ọ bụrụ na agbanyụọ ya, gbanwee ọnọdụ nzacha MAC ka 'Ekweere'
Next tinye ngwaọrụ gị na ndepụta nke adreesị MAC & họrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkagbu ma ọ bụ kwe ka ha banye na netwọk nke rawụta gị.
2. Kpọọ Blacklist
Ole na ole ndị na-ahụ maka WiFi ka ndị ahịa gbochie ngwaọrụ ndị a na-amataghị site na itinye ha na Blacklist site na ịpị igodo. Nke a dị iche yana ụdị rawụta mana ị nwere ike ịgbakwunye ngwaọrụ na Blacklist gị dị n'okpuru ngalaba 'Njikwa Ngwaọrụ' nke njikwa njikwa njikwa / njikwa ma ọ bụ kedu akụkụ nke na-edepụta ngwa niile ejikọtara na rawụta gị. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ “ngọngọ” ahịa isi ma ọ bụ ihe myiri.
3. Ngwa ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị na-achọ maka ụzọ zoro ezo ma dị mfe iji gbochie Ngwa ndị amataghị site na netwọk gị WiFi, enwere ngwaọrụ netwọk ndị ọzọ nke ọma ị nwere ike jikọọ na ngwaọrụ gị n'ọnọdụ ịbanye na nbanye n'ime usoro ntanetị. Dịka ọmụmaatụ FING, enwere ike ịnweta maka iOS & gam akporo ngwaọrụ ma nye gị nhọrọ nhọrọ nchịkwa iji nye ndị ọrụ ohere:
Gbochie stalkers & ngwaọrụ amatabeghị, na mbụ ha jikọọ na netwọkụ gị
Eziga gị ịdọ aka na ntị ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ọhụrụ dị na netwọkụ gị; iji hụ onye mmebi iwu (s)
Lelee ndepụta nke iche iche / ngwaọrụ na netwọkụ gị
Nweta nchọpụta ngwaọrụ ziri ezi nke adreesị IP, ụdị, adreesị MAC, aha ngwaọrụ, onye na-ere ahịa & onye nrụpụta.
Anata alerti ngwaọrụ & nche na netwọk gị email & ekwentị
Agbanyeghị otu jikọrọ gadget na netwọki WiFi, ị nwere ike igbochi ha ụzọ atọ ọ bụla dị n'elu na-enweghị ịgbanwe paswọọdụ gị.
Gịnị bụ WiFi hotspot?
WiFi hotspot bụ isi ihe ntanetị na-enye gị ohere ijikọ na netwọk WiFi na PC gị, ama ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla mgbe ị na-anọghị na ọfịs ma ọ bụ netwọkụ ụlọ gị.
Ebe Wi-Fi Hotspot
Ọtụtụ ụlọ ọrụ, obodo, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ amalitela igosi WiFi hotspot nke na - enyere ndị mmadụ aka ijikọ na njikọ intaneti siri ike, ngwa ngwa nke na - agbakarị ngwa ngwa karịa netwọọdụ mkpanaka ikuku.
Kedu ihe bụ WiFi hotspot & otu o si arụ ọrụ? Ndi ebe na-ekpo ọkụ enweghi ntukwasi-obi? Gụọ ihe niile Ama ịchọrọ n'okpuru.
Kedu ka WiFi hotspot si arụ ọrụ?
Mpaghara WiFi hotspot na-arụ ọrụ yiri njikọ Wi-Fi nke ị nwere ike ịhụ na ọfịs gị ma ọ bụ ụlọ gị. Ndị na-ekpo ọkụ WiFi na-arụ ọrụ site na ịnweta njikọ ịntanetị & jiri ihe ikuku ikuku pụrụ iche, dịka ndị na-eme njem nlegharị & modem, iji mepụta njikọ ikuku, site na ebe ị nwere ike ijikọ ekwentị, mbadamba, PC, ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ.
Ọsọ, ike, nso, na ọnụahịa nke hotspot WiFi nwere ike ịdị iche. N'agbanyeghị nke ahụ n'echiche niile dị n'azụ WiFi hotspot bụ otu ihe ahụ dị ka netwọk WiFi dabeere na ụlọ, & ị nwere ike jikọta na & jiri WiFi hotspot n'otu aka ahụ ị nwere ike iji netwọk WiFi dị n'ime.
Hodị WiFi na-ekpo ọkụ
AlThough WiFi hotspot dị n'ozuzu ha, enwere ụfọdụ ụdị dị iche iche nke ebe dị ọkụ, ha enweghịkwa obere esemokwu.
Igwe WiFi ọha na eze
A WiFi WiFi ọha na-ekpo ọkụ bụ ihe ọ dị ka ọ dị. Hodị ọkụ ndị dị otú a kachasị - ọ bụ ezie na ọ bụghị n'oge niile - enwere onwe ha iji. Ọnọdụ dị ka kọfị, ọbá akwụkwọ ọha, ụlọ ahịa, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ nwere ike inye njikọ WiFi n'efu maka ndị ahịa. N'ime obodo ole na ole, njikwa obodo ma ọ bụ ISP nwekwara ike ịnye njikọ WiFi ọha na eze n'efu na mpaghara ụfọdụ. Ndị a bụ ndị nweere onwe ha, ka na mpaghara ole na ole, dị ka ọdụ ụgbọelu & ụlọ nkwari akụ, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ iji nweta ebe WiFi na-ekpo ọkụ.
Ebe nchekwa WiFi ekwentị
E nwere ụdị iche dị iche iche nke ekwentị mkpanaaka. Ka ihe atụ, ị maara na ị nwere ike iji iPhone dị ka Wi-Fi hotspot? Yiri bụ nke kacha ukwuu gam akporo smartphones. Naanị gbanye atụmatụ a na ekwentị gị & jiri data cellular ya maka ịmepụta WiFi hotspot. Mgbe e mesịrị, ị nwere ike ijikọ na hotspot a na PC ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ nke na-agụnyeghị data cellular.
Ọzọkwa ị nwere ike ịzụta ebumnuche wuru Wi-Fi hotspot nke emebere iji gbanwee njikọ data ekwentị na njikọ WiFi dị ike. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-agagharị nke ukwuu maka ọrụ ma ọ bụ na-achọkarị ịnweta njikọ WiFi a tụkwasịrị obi nwere ike itinye aka na otu n'ime ụdị ngwaọrụ ndị a nwere ike ịzụta n'aka ọtụtụ ụlọ ọrụ ekwentị mkpanaaka.
Ebe akwụ ụgwọ tupu akwụ ụgwọ
Ebe a na-akwụ ụgwọ WiFi a kwụrụ ụgwọ dị ka ebe okpomọkụ cellular, ka nwere oke data nwere oke nke ị nwere ike iji. Nwere ike ịkwụ ụgwọ maka data a, mgbe ị gachara, ịnwere ike ịzụta ọzọ. Nke a bụ nnukwu ụzọ iji nweta hotspot cellular na-enweghị ndenye data data mkpanaka ogologo.
Thezọ kachasị mfe iji nweta WiFi hotspot bụ imeghe PC gị ma ọ bụ mkpanaka & malite nyocha. N'ọtụtụ ebe ọha, ị ga-ahụ na enwere ọtụtụ oghere WiFi ọha na eze nwere ike ijikọ, na-akwụghị ụgwọ. Nwedịrị ike ịchọ WiFi hotspot na-enye site na ISP gị.
Idozi Mpaghara Nwụrụ Anwụ WiFi
Idozi Mpaghara Nwụrụ Anwụ WiFi - A WiFi nwụrụ anwụ mpaghara bụ isi oghere dị n'ụlọ gị, ụlọ gị, ebe ọrụ gị, ma ọ bụ mpaghara ọ bụla ọzọ Wi-Fi ga-ekpuchi, mana ọ naghị arụ ọrụ ebe ahụ - ngwaọrụ enweghị ike ijikọ na netwọkụ. Ọ bụrụ n ’iwere gadget gaa na mpaghara nwụrụ anwụ - ikekwe ị na-eji mbadamba ụrọ ma ọ bụ ekwentị wee banye n’ime ụlọ ebe mpaghara nwụrụ anwụ nọ - Wi-Fi na-akwụsị ịrụ ọrụ & ị gaghị enweta akara. Emepụtara Fi, yabụ enwere ike wulite ha n'ụzọ na-egbochi Wi-Fi. Nnukwu ihe ndị dị ka mgbidi ọla ma ọ bụ kọfịl faịlụ nwere ike igbochi akara Wi-Fi.
Ayszọ edozi ndozi WiFi
N'okpuru bụ ndụmọdụ ole na ole maka ikpuchi Wi-Fi mkpuchi gị.
Bugharịa gị rawụta
Ọ bụrụ na rawụta dị n'otu akụkụ nke ụlọ gị, ụlọ, ma ọ bụ ebe ọrụ gị ma enwere mpaghara nwụrụ anwụ n'akụkụ nke ọzọ nke ụlọ gị, gbalịa ịgbanwe router na ebe ọhụụ dị n'etiti etiti ụlọ gị, ụlọ, ma ọ bụ ebe ọrụ.
Gbanwee poolu nke rawụta gị
Gbaa mbọ hụ na poolu nke rawụta ikuku gị dị elu ma na-arụtụ aka. Ọ bụrụ n ’ọ na-egosi n’ụzọ ihu igwe, ịgaghị enweta otu oke mkpuchi.
Abù & Nyegharịa Blockades
Ọ bụrụ na gị Wi-Fi rawụta nọ na-e wezụga metal file kọbọd na-ebelata gị mgbaàmà ike. Gbalịa weghachite ọnọdụ gị maka ike mgbaàmà siri ike & hụ ma ọ bụrụ na nke ahụ na-ewepụ mpaghara nwụrụ anwụ.
Gbanwee na Ntanetị Ikuku Ntanetị
Jiri gadget dị ka maka gam akporo ma ọ bụ na SSIDer maka Wifi Analyzer Mac ma ọ bụ Windows iji chọta netwọk ikuku jupụta ntakịrị maka netwọ Wi-Fi gị, na-esote gbanwee ntọala na rawụta iji belata ntinye site na netwọkụ ikuku ndị ọzọ.
Tọọ a Ikuku Repeater
Kwesịrị ịtọlite ​​ihe nrụpụta ikuku maka ịgbatị mkpuchi n'elu mpaghara buru ibu ma ọ bụrụ na ọnweghị ndụmọdụ ọ bụla dị n'elu. Nke a nwere ike ịdị mkpa na nnukwu ọfịs ma ọ bụ ụlọ.
Jiri njikọ Wired iji dozie mpaghara Nwụrụ Anwụ WiFi
I nwedịrị ike ịtụle ịtọlite ​​wiwi Ethernet n'ịntanetị. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ikuku ikuku n'akụkụ niile nke ụlọ gị, mana ị gaghị enwe ike ịnweta akara Wi-Fi n'ime ime ụlọ gị - ikekwe ị nwere wires ọkụkọ ọla n'ime mgbidi. Nwere ike ịgba ọsọ eriri Ethernet site na rawụta gaa ime ụlọ ihi ụra gị, ma ọ bụ jiri njikọ njikọ eriri ike ma ọ bụrụ na ịnweghị oke ọkụ n'ịhụ eriri ndị na-awagharị awagharị, wee setịpụ router wireless wireless n'ime ụlọ ahụ. Then ga-ahụ mkpa a wireless internet ntinye ke mbụ efu ụlọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mpaghara ndị nwụrụ anwụ ikuku nwere ike ịdabere na rawụta, ebe ọ dị, ndị agbata obi gị, ihe mgbidi ụlọ gị rụrụ, oke oghere mkpuchi gị, ụdị ngwaọrụ elektrọnik ị nwere, na ebe edobere ihe. Enwere ihe zuru oke nke nwere ike ibute nsogbu, mana nnwale na njehie ga - enyere gị aka ịpinye nsogbu ahụ.
Ikuku ndị nwụrụ anwụ mpaghara adịghị mgbagwoju anya ịchọpụta ma ọ bụrụ na ị na-eje ije dị nso ụlọ gị, ọfịs ma ọ bụ ụlọ gị. You've chọpụtachara ha, inwere ike iji usoro dị iche iche nwalee ma mezie ihe ọ bụla na-ebute nsogbu ahụ.
Chedo netwọki WiFi gị
Chedo Netiwọ WiFi gị dị mkpa ebe ọ na - echekwa ndị na - awakpo gị na ichekwa data gị.
Etu esi echebe netwọkụ Wi-Fi gị
Iji Chedo netwọkụ Wi-Fi gị na-eme ka ọ dị mma site na hackers, e nwere ọtụtụ ihe ị ga-ewere:
1. Gbanwee ndabere aha njirimara & passkey
Ihe mbu na nke kachasi nkpa igha eme iji kpuchido nke gi WiFi Network bụ ịgbanwe ndabara usernames & okwuntughe ka ihe ọzọ na-echebe.
Ndị na-eweta Wi-Fi na-ekenye aha njirimara & passkey na-akpaghị aka na ntanetị & ndị na-agba ọsọ nwere ike ịchọta passkey ndabara a na ntanetị. Ọ bụrụ na ha enweta netwọkụ ahụ, ha nwere ike gbanwee passkey na ihe ọ bụla ha chọrọ, kpọchie ndị na-ere ya ma weghara netwọkụ ahụ.
Dochie aha njirimara & okwuntughe na-eme ka ọ nwekwuo mgbagwoju anya maka ndị mwakpo ịchọta onye Wi-Fi ọ bụ & nweta ohere na netwọkụ. Ndị na-agba ọsọ nwere ngwa ngwa ọgbara ọhụrụ iji nwalee ọtụtụ narị passkey & aha njirimara nwere ike, yabụ ọ dị mkpa ịhọrọ okwuntughe siri ike nke jikọtara akara, mkpụrụedemede, na ọnụọgụ, iji mee ka o sie ike ntụgharị.
2. Gbanwee na Ikuku Izo ezo Nzuzo
Izo ya ezo bu otu uzo di nma nke ichedo netwok network gi. Izo ya ezo na-arụ ọrụ site na ịgwakọta data gị ma ọ bụ ọdịnaya dị n'ime ya ka ndị na-agba ọsọ ghara idozi ya.
3. Iji Virtual Private Network VPN
Neti Onwe Onye Nwepu Aka bu netwoko nke na enye gi ohere ijikọ n’ozi ezoro ezo, nke echekwadoghi onwe ya. VPN na-ezochi data gị ka onye hacker ghara ikwupụta ihe ị na-eme n'ịntanetị ma ọ bụ ebe ịnọ. Na mgbakwunye na desktọọpụ, enwere ike iji ya na laptọọpụ, ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Nakwa desktọọpụ, enwere ike iji ya na ekwentị, laptọọpụ, ma ọ bụ na mbadamba.
4. Gbanyụọ Wi-Fi Network ma ọ bụghị n'ụlọ
Ọ dị ka ihe dị nfe mana otu ụzọ dị mfe iji kpuchido netwọkụ ụlọ gị ịwakpo bụ ịgbanye ya mgbe ị na-anọghị n'ụlọ. Neti Wi-Fi gi adighi acho ka aru oru 24 awa ubochi, ubochi asaa n’izu. Gbanyụ Wi-Fi gị mgbe ị na-anọghị n’ụlọ na-ebelata ihe gbasara nke puru iche nke ndị na-agba ọsọ na-achọ ịbanye na netwọkụ gị mgbe ịnọ n’ụlọ.
5. Nọgidenụ na-rawụta software emelitere
Wi-Fi software ga-modernized iji chebe netwọk nche. Firmlọ ọrụ nke ndị na-agagharị agagharị dị ka ụdị sọftụwia ọ bụla nwere ike ịgụnye ihe ngosi nke ndị na-agba ọsọ na-achọ iji. Ọtụtụ ndị na-agagharị agagharị agaghị enwe nhọrọ nke mmelite akpaaka ka ị wee chọọ ka ha na-emelite ngwanrọ ahụ iji jide n'aka na echekwara netwọkụ gị.
6. Jiri Firewalls
Oke W-Fi routers nwere a wuru na-netwọk firewall nke ga-echebe brọdband netwọk & ịlele ọ bụla netwọk mwakpo si stalkers. Ha ga-enwe nhọrọ ị ga - akwụsị ka ọ dị oke mkpa inyocha na firewall gị na - agbanye iji tinye mgbakwunye nchekwa nchekwa gị.
7. Kwee nzacha nzacha nke Adreesị MAC
Imirikiti ndị na-eme ihe ntanetị na-agụnye njirimara nanị nke a maara dị ka adreesị nke Media Access Control (MAC). Nke a na-achọ ịkwalite nchebe site na ịlele ọnụọgụ nke ngwaọrụ nke nwere ike jikọta na netwọk.
Gịnị kpatara Internetntanetị m ji nwayọ?
6zọ isii kachasị elu iji nagide Njikọ Ntanetị lowntanetị
Ọ dịghị ihe na-ewe iwe karịa ịnweta njikọ Wi-Fi ma ọ bụ Ethernet ngwa ngwa ịntanetị. N'okpuru bụ ụfọdụ echiche iji dozie nsogbu, zie ezi, iji merie ọsọ ọsọ ịntanetị ngwa ngwa.
1. Lelee atụmatụ ịntanetị gị
N'oge ụfọdụ, njikọ ịntanetị gị adịghị nwayọ dịka ị na-akwụghachi ụgwọ intaneti crappy. Banye na ebe nrụọrụ weebụ na-eweta gị wee chọpụta atụmatụ ị nwere. Ugbu a gaa na ngwa ngwa.com ma ọ bụ saịtị ọ bụla ọzọ ma nwalee ọsọ ọsọ. Thezọ kachasị mma iji mee ka ịntanetị dị ngwa bụ iji kwalite atụmatụ gị.
2. Nye gị ngwaike na eluigwe na ala fix
Lelee rawụta gị & mọdem & mee ihe nrụpụta ngwa ngwa ma hụ ma ọ rụọ ọrụ ahụ. Nyochaa PC ndị ọzọ dị n'ụlọ gị ka ịlele ma ọ bụrụ na ha internet jiri nwayọ. Ọ bụrụ na esemokwu ahụ mere naanị n'otu PC, okwu a bụ PC ahụ, ọ bụghị modem gị ma ọ bụ router.
3. Idozi gị Wi-Fi n'ókè
Ikwu okwu nke Wi-Fi, ị nwere ike ịchọpụta na intaneti gị & router dị mma; ka akara ngosi ikuku gị adịghị ike. Nke a nwere ike mepụta nwayọ nwayọ - ma ọ bụ, nke kachasị dị ala, ahụmịhe nchọgharị juputara na ụra. Mgbe ahụ, ịnwere ike ịchọ ịmegharị, ịmegharị, na ịkwalite rawụta gị na usoro ụfọdụ.
4. Gbanyụọ ma ọ bụ machibido bandwit-hogging ngwa
Ọ bụrụ na ngwaike ahụ na-egosi na ọ na-arụ ọrụ, debe ma ọ bụrụ na mmemme ọ bụla ọzọ na-achịkwa njikọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ibudata faịlụ na BitTorrent, nchọgharị weebụ na-emebu ga-adị nwayọ. Ga-anwale ịtinye mgbakwunye dịka Nzuzo Nzuzo & AdBlock Plus nke ga-egbochi ole na ole nke mgbasa ozi bandwidth na-achịkwa, vidiyo & ihe nkiri, nke nwere ike iri njikọ gị.
5. Jiri ihe nkesa DNS ọhụrụ
Mgbe ị na-ede adreesị n'ime ihe nchọgharị ahụ, PC gị na-eji ihe a maara dị ka DNS iji chọọ & kọwaa ya na adreesị IP na-anabata PC. N'oge ụfọdụ, ọ bụ ezie, sava PC gị na-eji chọọ ihe ọmụma ahụ nwere ike ịnwe nsogbu, ma ọ bụ gbadaa kpamkpam. Ọ dabara nke ọma, ị nwere ọtụtụ ngwa, nhọrọ ị ga - eji mee ihe, dị ka igwe ojii ma ọ bụ Google DNS.
4. Kpọtụrụ ndị na-eweta ịntanetị gị
Ọ bụrụ na ị gabiga ihe niile dị mkpa nchọpụta nsogbu usoro & gị internet bụ ka onye na-adịghị, mgbe ahụ ọ bụ oge iji kpọtụrụ gị internet soplaya & ele ma ọ bụrụ na nsogbu dị na njedebe ha. Rịba ama: echela naanị na ha emela ihe ọ bụla na-ezighi ezi ma mesoo onye ahịa gị ọrụ. Surely ghaghi inwe nsonaazụ dị mma ma ọ bụrụ na ha na-enye gị ọsọ na-ezighi ezi n'oge a niile.
5. Mee ka weebụ dị mma maka njikọ dị nwayọ
Nchọpụta nsogbu ngwa ngwa ịntanetị nwere ike iwe obere oge, na nwa oge ị chọrọ nchọgharị. Ma ọ bụ ikekwe ị nọ na cafe ma ọ bụ na ụgbọ elu, ọ nweghịkwa ihe ị ga - eme na nwayọ nwayọ. Yabụ, ọ bụ oge ịkwalite weebụ gị maka njikọ dị nwayọ.
6. Na-arụ ọrụ nke ọma
Ọ bụrụ na ị ga-arụrịrị ọrụ na njikọta nwayọ, ịnwere ike ịhọrọ ọrụ dị iche iche karịa ma ọ bụrụ na ịntanetị kacha mma. Kewaa ihe aga-eme gi na ndi bandwidth-light as well as bandwidth-heavy ones. Mgbe ị nọ na njikọ nwayọ na-eme ndị ọkụ ahụ & na-anakọta ọrụ niile bandwidth-arọ jikọtara ọnụ ka ị nwee ike ịme ha ozugbo ị nwetara njikọ ọsọ ọsọ.
Kedu Adreesị IP ndabere?
An Adreesị intaneti Internetntanetị bụ akara ọnụọgụ nke enyere na ngwaọrụ niile jikọtara na netwọk PC nke na-eji Protocol Internet maka nnyefe. Adreesị IP na-eburu ebumnuche 2 dị mkpa: interface ntanetị ma ọ bụ njirimara nnabata & adreesị ebe.
Adreesị IP ekenyela PC site na netwọk ma ọ bụ adreesị IP ekenyela ngwa ngwaọrụ site na ndị na-ere ngwaahịa. A na-etinye ngwaọrụ mmekọrịta netwọk na adreesị IP ndabara; ọmụmaatụ, a na - ekenye ndị na - ahụ maka Linksys na adreesị IP maka 192.168. 1.1
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga ebe n’ụwa, ị rịọ maka adres ya ma tinye ya na GPS. Mgbe ị chọrọ ịga ebe na internet, ị ọbụna na-arịọ maka ya address, & ị dee ya n'ime URL mmanya nke gị họọrọ nchọgharị na weebụ.
Tozọ ịchọta adreesị IP ndabara nke WIFI ka enyere n'okpuru:
Ọ bụla rawụta onye nwere ndabara nbanye rawụta IP address kwesiri ngosi na isi nke rawụta ngwaike. Ọ bụrụ na akpọghị ya ebe ahụ, yabụ ị nwere ike nweta ya na dọkụmentị ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka na-abịa na rawụta mgbe ị zụrụ ya.
Ọ bụrụ na ISP akwadebe gị na rawụta ya mere ọ ga-agwa gị na akpaghị aka adreesị IP & NJ ịbanye n'ime rawụta & tinye Internetntanetị.
Tozọ Chọta Ndi an-kpọ rawụta Aha ojii ma Paswọdu?
Ndabara nbanye NJ nwere ike imezu si rawụta obere akwukwo na-abata na rawụta mgbe mbụ ị zụrụ & jikọọ ya.
Emekarị, n'ihi na kacha nke rawụta, ndabara NJ bụ ma “admin” gbakwunyere “admin”. Ma, njirimara ndị a nwere ike ịgbanwe dabere na onye na-eme ihe ntanetị.
ma ọ bụrụ na ị furu efu obere akwukwo, mgbe ahụ onye nwere ike ịchọta ndabara NJ si onwe ya rawụta ngwaike ka ha ga-ebipụta na azụ nke onye ọ bụla rawụta.
Mgbe anyị na-eji router, anyị nwere ike ịgbanwe NJ n'oge ọ bụla iji zere ịbanye na netwọk ahụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Nke a ga-eme iji tọgharịa rawụta & tinye ọhụrụ passkey dị ka kwa nhọrọ.
Iji rawụta nrụpụta na-ejide igodo nrụpụta maka nkeji ole na ole & a ga-agbanyeghachi rawụta na nrụpụta nrụpụta ndabere ya. Ugbu a, i nwere ike ịgbanwe ndabara ntọala & ịtọ nbanye IDs gị oke.
A na-edozi ngwaọrụ netwọk n'otu adreesị IP ndabara; dịka ọmụmaatụ, a na-ekenye ndị na-ahụ maka Linksys adreesị IP nke 192.168.1.1. Adreesị IP ahụ bụ nke ọtụtụ ndị ahịa na-emebighị emebi ka enwere ike ịgbanwe ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka nrụpụta netwọkụ siri ike karị. Gaa na ọnụ ụzọ ámá ndabara & adreesị IP.
The okwu ndabere rawụta IP address pụtara otu rawụta IP address nke ị na-jikọrọ na-agbalị nbanye. Achọrọ ya maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ netwọkụ ụlọ.
The adreesị IP ndabara rawụta dị mkpa ịgbatị na ntanetị ntanetị iji nweta ebe njikwa ya na ntọala netwọk. May pụrụ nanị banye ntinye netwọk ntọala nke rawụta mgbe dee a adreesị n'ime ihe nchọgharị weebụ nke adreesị mmanya.
Mbido TP-Link rawụta
Kedu Afọ M Ugbu a
-esi chọta ndabere rawụta ip
Esi tọgharịa rawụta gị na ntọala ndabara
2022 192.168.8.1 • Wuru na GeneratePress